लाेकप्रिय बन्दै दर्शक माझ, के.पि. घिमिरे र उनकाे पलेंटी साँझ - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २९, २०७६ समय: १२:३०:११
मोरङ / पछिल्लो समय केपी घिमिरे र उनकाे पलेंटी साँझले निकै चर्चा बटुलिरहेकाे छ । लामो समयदेखि रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तोताका रुपमा प्रस्तुत भईरहेका केपी घिमिरेकाे नम्र स्वभाव र उनकाे मिठाे बाेलीले जाे काेहीलाइ पनि माेहित पर्छ । उनका रेडियाे कार्यक्रमहरू ‘मेराे देश’, ‘नझरेका फुलहरु’, र ‘संगित समर्पण’ स्राेताहरू माझ आज पनि उत्तिकै लाेकप्रिय छन् ।
उनका कार्यक्रमहरूले जहिले पनि नेपाली गित संगितकाे उठान गरिरहेकाे हुन्छ । उनकाे आफ्नै शैली छ, उनकाे आफ्नै भाका छ । रडियाेमा उनकाे आवाज सुनेर मख्ख पर्नेहरू धेरै छन् । उनको प्रस्तुतिमा झुम्मिनेको संख्या समेत ठुलै छ ।
केही बर्ष यता घिमिरेले रेडियोमा सञ्चालन गर्दै आएकाे कार्यक्रम ‘नझरेका फुलहरु’ को नामबाट पलेँटी साँझ श्रृंखला समेत सञ्चालन गरिरहेका छन । साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धनका निम्ति विगत ३ वर्ष देखि संचालित पलेँटी साँझमा ख्यातिप्राप्त कलाकार एवम् श्रष्टाहरुले सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
उनकाे पलेँटी साँझ श्रृङ्खलाको १५ औँ संस्करणमा लोकप्रिय गायक कर्णदास लाई सम्मान गर्ने भएका छन् भने नायक भुवन के.सी.को पनि प्रस्तुती रहने छ । साथै साहित्यकार अमृत प्रसाद आचार्य, बादलदेबी चाम्लीङ र गायिका सुनिता लिम्बुको प्रस्तुतीमा दर्शकहरुले मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने छन् ।
ठुला ठुला महल होइन, पुरानो डुङ्गा, भेटिएर छुट्नु भन्दा, तिम्रो मेरो सम्बन्धको,… लगायतका दर्जनौ गीतले नेपाली सङ्गीत पारखि श्रोताहरुमाझमा गायक कर्णदास चर्चित बनेका छन् । साथै सम्झना, दक्षिणा, चीनो, नेपाली बाबु, बादल पारि, सपना,सुपरस्टार लगायतको सयौँ चलचित्रमा अभिनय गरेका लोकप्रीय नायक भूवन के.सी. लाई पनि यस क्षेत्रका दर्शकहरुलाई पहिलो पटक भेट्न पाउने भएका छन् ।
कार्यक्रम मोरङको सुन्दरहरैचा स्थीत कोसीहरैचा उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल विराटचोकमा भाद्र ५ गते विहिबार बेलुकी ७ः३० बजे देखि सुरुहुने प्रस्तोता घिमिरेले बताएका छन् ।
प्रस्तोता घिमिरे गीतकार एबम् सङ्गीतकार हुन् । आधादर्जन भन्दा बढी एल्बममा उनका गीतहरु बजारमा आइसकेका छन् । घिमिरेको रचना र सङ्गीतमा रामकृष्ण ढकाल, दीपक लिम्बू, कुबेर नेपाली, मेनुका राई, संञ्जीव धिमाल, रुपक राई, झुमा निरौला लगायतले स्वर दिइसकेका छन् । घिमिरे शिक्षण पेशामा आवद्ध छन् साथै उनी एक रेडियो संचालक र कार्यक्रम निर्देशक समेत हुन् ।
यस भन्दा अगाडिका श्रृङ्खलाहरुमा गायक लाक्पा शेर्पा, यम बराल, रामकृष्ण ढकाल, लेखु विवस, कुबेर नेपाली, हेमन्त शर्मा, राज सिग्देल, सत्यकला राई, तुलसी पराजुली, बरिष्ठ सङ्गितकार राजु सिंह, गीतकार तथा सङ्गीतकार रमेश कार्की, लोक गायक एल.पी. जोशी, साहित्यकार मनुमञ्जील, स्थानीय श्रष्टाहरु जे.वी थुलुङ, रेखा सुवेदी, तिला लेकाली, तारा पराजुली, हेमन यात्री, सञ्जीव धिमाल, यमुना पराजुली, मिनकुमार नमोदित श्रेष्ठ लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी श्रष्टाहरुको प्रस्तुति भइसकेको छ ।
श्रष्टाहरुलाई सम्मान र भाषा, साहित्य,कला, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण र विकस गर्न नझरेका फूलहरुले नियमित रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्दै लैजाने प्रस्तोता के.पी. घिमिरेले बताए ।